Ribao BC-40 Imwe Pocket Yakasanganiswa Mari Counter
BC-40 ndiyo yedu itsva yakagadziridzwa, inodhura-inoshanda mhinduro yekuverenga kukosha uye kuona. Ndiyo mhinduro yakakwana kune retail mutengi uye bhangi fr...
Ribao CS-600B Coin Counter uye Sorter
Iyo CS-600B ibasa rinorema rekuronga nekuverenga muchina. Inogona kuverenga uye kuronga kusvika ku600coins/min, ichiverenga zvese Qty uye Huwandu panguva imwe chete...
Ribao BC-55 Imwe Pocket Yakasanganiswa Mari Counter
Iyo RIBAO BC-55 ndiyo inonyanya kungwara uye yakavimbika yakawanda-mari yebhengi kusarura inoshandisa maviri CIS uye inomhanya paLinux system. Izvi ...
Ribao CS-610S Coin Counter uye Sorter
Yakatenderwa neECB, iyo RIBAO CS-610S+PRO imari yekuverenga nekugadzirisa iyo inogona kuronga kusvika kumasangano matanhatu uye inoramba mari dzekunze, co...
Ribao CS-211S Coin Counter uye Sorter
Iyo RIBAO CS-211S ndeyemhando yepamusoro yakasanganiswa mari yekuverenga muchina unoshandisa njanji musimboti. Inoona uye kugadzirisa manyepo, mari dzekunze/t...
HCS-3500AH inorema-basa uye yakakwirira kumhanya mari yekuverenga muchina une mota hopper. Kana ichienzaniswa neHCS-3300, ine kukurumidza kumhanya, hombe hombe ...
Ribao HCS-3300 Mari Yemari
HCS-3300 inorema-basa uye yakanyanya kumhanya coin yekuverengera muchina, inokodzera pasi rese mari dzakatenderera uye tokeni. Inoshandiswa zvakanyanya mumabhangi, supermark ...
Ribao BCS-160 Dual Pocket Yakasanganiswa Mari Counter
Iyo BCS-160 modhi isiri-yekumira 1 + 1 muhomwe yebhangi discriminator uye sorter iyo ine mutengo unoshanda, wakavimbika, uye unorema basa. Iyo yakagadzirirwa ne ...
BC-35 ndeyedu yazvino banknotibhendi yakagadziriswa zvichibva pane chimiro cheBC-55. Icho chinorema basa chidimbu uye huwandu hwekuverenga muchina neLCD scree ...